Sannad-guuradii 45aad ee Madax-bannaanida Suriname
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Suriname » Sannad-guuradii 45aad ee Madax-bannaanida Suriname
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Wararka Suriname • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Sannad-guuradii 45aad ee Madax-bannaanida Suriname ayaa si heer sare ah loogu dabaaldegay 25-kii Noofambarth 2020. Maalinta Madax-bannaanida (Onafhankelijkheidsdag) waxaa lagu calaamadeeyay ciidda guud ee sanadlaha ah
Bishii Nofeembar 25th 1975, Suriname waxay xornimadeeda ka qaadatay Boqortooyada Netherlands. Bilooyinkii u dambeeyay xorriyadda, ku dhowaad saddex-meelood meel dadka reer Suriname waxay u haajireen Netherlands.
Madaxweynihii ugu horeeyey ee dalka wuxuu ahaa Johan Ferrier, gudoomiyihii hore, halka Henck Arron uu ahaa raiisul wasaare.
Waxyaabaha soo socdaa waa kuwa ugu waawayn ee MUUQAAL kulanka dadweynaha ee ZOOM ee dhowaan la qabtay (22/11/2020) kuna saabsan mawduuca “The 45th Sannad-guurada Madax-bannaanida Suriname. ” Kulankii Pan-Caribbean-ka waxaa lagu marti galiyay Xarunta Dhaqanka Indo-Caribbean-ka (ICC). Waxaa gudoomiye ka ahaa Varsha Ramrattan amd oo uu daadihinayay Dr. Kirtie Algoe, oo ah haween ka soo jeeda Suriname.
Dadka hadlay waxay ahaayeen ANGELIC ALIHUSAIN-DEL CASTILHO, Safiirkii hore ee Suriname ee Indonesia ahaana Gudoomiyaha Xisbiga Democratic Alternative91 (DA'91); DR. DEW SHARMAN, oo ah dhakhtar caafimaad isla markaana ah Ku-xigeenka Guddoomiyaha Golaha Shacbiga / Baarlamaanka Suriname; iyo DR STEVEN DEBIPERSAD, sidoo kale dhakhtar caafimaad iyo bare cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Anton de Kam ee Suriname.
CASTILHO wuxuu yiri:
“Suriname diiradiisa ugu weyni waxay ahayd, welina waa, Netherlands, inkasta oo Suriname ay ku biirtay CARICOM [the Caribbean Community] 1995.
Sannadihii aan xorriyadda qaadanay oo dhan, ma jirin isku dhacyo qowmiyadeed. Si kastaba ha noqotee, weli waa wax ay tahay inaan si firfircoon uga ilaalino. Si qowmiyadeed loo mideeyo Suriname waa inay ahaato hadafkeena 45 sano ee soo socota.
45-kii sano ee la soo dhaafay, waxaa jira hal hay'ad oo keliya - garsoorka - oo weli taagan oo ka hor yimid maamul xumo, welina lagu kalsoon yahay lana ixtiraamo.
Madax-bannaanidu waa safar aan dhammaanayn. Ka dib 45 sano, wali waxaan leenahay khilaafaad aan ku xalin karno xuduudaheena, laakiin sidoo kale xuduudaheena dadkeena asaliga ah. Tani ma noqon karto mana noqon karto dhaxalka jiilka dambe. Waa inaan aasaas adag u dhignaa dowlad wanaagga, dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka sharciga iyo sidoo kale horumar dhaqaale oo waara. ”
DR SHARMAN wuxuu yiri:
Sanadkii 1873, Hindidii ugu horreysay waxay yimaadeen Lalla Rookh iyagoo ah shaqaalayaal caymis ku jira. Guud ahaan, qiyaastii 33.000 qof ayaa yimid Suriname oo qiyaastii 50% ay ku noqdeen Hindiya.
Dadka go'aansaday inay sii joogaan Suriname waxaa asal ahaan loola dhaqmay sidii muwaadiniin heerka labaad ah. In kasta oo ay aad u shaqeeyeen si ay u helaan nolol ka wanaagsan, looma oggolaan inay bulshada dhexgalaan, tusaale ahaan, iyada oo laga reebay shaqooyinka dawladda, iwm.
Tan iyo markii lagu dhawaaqay xuquuqda codbixinta guud ee 1949, wacyigelin ayaa u timid Surinamese-Hindans in si looga hormaro bulshada, siyaasadda iyo waxbarashadu waa inay noqdaan laba gaari oo muhiim ah.
Halganka ay ugu jiraan xuquuq siman oo ka dhan ah inta badan Afro-Surinamese, iyo fursadaha jira, xisbiga siyaasadeed ee VHP ayaa la sameeyay. Xisbigani wuxuu noqday mid caan ah oo dejiyay xiisadaha midab takoorka isagoo qaatay walaaltinimo iyo siyaasad walaaltinimo.
Jawiga siyaasadeed ee u diyaar garowga Madaxbanaanida ayaa ahaa mid kacsan oo cabsi galinaya dad badan oo reer Surinama-Hindi ah oo ka baqayay kororka qowmiyadeed sida ku dhacday Guyana toban sano ka hor. Caqabadaha dhaqan-siyaasadeed awgood, kumanaan reer Surinamese ah - oo asal ahaan ka soo jeeda Hindiya - waxay u guureen Nederland mustaqbal wanaagsan iyo fursado waxbarasho.
Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah dadka ayaa sii joogay Suriname si ay gacan uga geystaan ​​horumarinta dalka. Dadka asal ahaan ka soo jeeda Hindida ayaa hadda qayb muhiim ah ka ah bulshada Suriname, in kasta oo xaaladuhu ka fiicnaan karaan.
Qaar ka mid ah dadkaas ayaa koray oo tiradooda lagu qiyaasay 400,000. Kuwii Nederland aaday sidoo kale waxay gacan ka geysteen horumarinta dalkaas sidoo kale. ”
DR DEBIPERSAD wuxuu yiri:
“Suriname waxay mareysaa isgoys muhiim ah. Waxaan hadda ku dhex jirnaa xiisad kacsan, iyadoo saadaasha koritaanka xun ay sanadkaan tahay 12.5%, iyo deynta Dowladda oo ka badan 125% ee GDP. Isku dar natiijooyinkan adoo adeegsanaya qiimeynta CC-ga oo ku wajahan aakhiro iyo halista waddan sare, ka faa'iideysiga lacagaha cusub iyo soo jiidashada maalgashadayaashu waxay noqdeen caqabad weyn.
Deyn aan la adkeyn karin oo lagu daray Covid-19 hoog ayaa keentay hoos u dhac weyn oo ku yimid bonds-ka Dowladda, lumiyay ku dhowaad 40% qiimaha. Bishii Oktoobar waxay ahayd markii labaad ee sanadkan oo ay Dowladdu weydiisato deyn bixiyeyaasha in dib loo dhigo lacagaha dulsaarka ah.
Hadalkeyga kama dambeysta ah wuxuu ku socdaa wadada hore: Marka ugu horreysa, Dowladdu waa inay ka shaqeysaa qorshe dib-u-habeyn ballaaran. Tubta loo dejinayo xasiloonida iyo koritaanka joogtada ah waa in lagu soo gabagabeeyaa ASAP.
Sida ay muhiim u tahay qorshaha maaraynta deynta muddada-dheer, gaar ahaan maadaama deynta dowladda ay ka badan tahay 125% GDP iyadoo dhaqaalaha uu ku jiro hoos u dhac aad u daran iyo xitaa amaah badan oo loo baahan yahay si loo kiciyo wax-soo-saarka. ”
Iyadoo la raacayo qorshe guri, caawimaad ka socota IMF waa in la raadsadaa. Tani waxay noqotay baahi loo qabo soo celinta kalsoonida deyn bixiyeyaasha dibedda; tani waxay ku saabsan tahay uun dhinaca lacagta iyo maaliyadeed.
Waxaa sidoo kale muhiim ah iskaashi lala yeesho Mareykanka, NL, F, iyo kuwa kale, si loo raadsado maalgashadayaal shisheeye. Khatar-goosadka ayaa ka fogeeyay maalgashadayaasha. Qorshayaashaas marka la eego, faa'iidadayada isbarbardhigga ah ayaa kor loo qaadi doonaa. ”
Waxaa qoray Dr Kumar Mahabir